प्रदेश नं १ को नाम किराँत प्रदेश नै राख्नु पर्छ भन्नेमा प्रचण्डको जोड, हेरौं उहाँले के के भने होला ? भिडियो सहित « Kalakhabar
प्रदेश नं १ को नाम किराँत प्रदेश नै राख्नु पर्छ भन्नेमा प्रचण्डको जोड, हेरौं उहाँले के के भने होला ? भिडियो सहित
प्रकाशित मिति : बुधबार, २३ श्रावण २०७५ १४:१७
कलाखबर संवाददाता,२३,साउन–ललितपुर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश नं १ को नाम ‘किराँत प्रदेश’ नै राख्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । किराँत राई यायोक्खाको ३१औं स्थापना दिवसको अवसरमा मंगलबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा किराँत शब्द इतिहास, सभ्यता, संस्कृति
भिडियो हेर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला ।